अक्षय कुमारको फिल्म 'केसरी' को सेटमा लाग्यो आगो !
अक्षय कुमारको फिल्म ‘केसरी’ को सेटमा लाग्यो आगो !
एजेन्सी । भारतीय अभिनेता अक्षय कुमारको नयाँ फिल्म ‘केसरी’ को सेटमा आगलागी भएको छ। यतिबेला युद्धमा आधारित फिल्म ‘केसरी’ को सुटिंगमा व्यस्त रहेका अक्षयको उक्त फिल्मको सेटमा आगो लागेको हो।
भारतीय मिडिया रिपोर्ट्सका अनुसार चलचित्रको एक सीन छायाँकन गर्ने क्रममा सेटमा आगो लागेको थियो। फिल्मको सेटमा आगलागी भएपछी सबै जलेर खरानी भएको छ। तथापी उक्त आगलागीभाट कुनै पनि प्रकारको मानवीय क्षति भने नभएको बताईएको छ ।
फिल्म निर्माताका अनुसार उक्त सेट निर्माण गर्न लगभग ८ करोड लागेको थियो, जुन सबै जलेर नष्ट भएको छ। इन्सुरेन्स कम्पनीले क्षतिको विवरणसबै लिएको र प्रोडक्शन हाउसले इन्सुरेन्स कम्पनीसँग क्षतिको दाबी गरिसकेको पनि समचारमा जनाईएको छ ।
चर्चित निर्देशक अनुराग सिंहद्वारा निर्देशित यस फिल्मको निर्माता करण जोहरको रहेका छन् ।
प्रकाशित : बुधबार, जेठ ०२, २०७५१२:४८
अवसर र चुनौति दुवै छ मलाई ‘ब्लाइन्ड रक्स’ वेनिशा हमाल
कार्डियक अरेस्ट हैन यस कारण भएको रहेछ श्रीदेवीको निधन, भयो सनसनीपूर्ण खुलासा
आफ्नो पतिसँग पूलमा नग्नरुपमा रेचलले गरिन् यस्तो कामुक हर्कत ! भाइरल भए तस्विरहरु ! (तस्विर सहित)
नाम चलेका यी ३ नायिकाले अक्षय कुमारसँग अभिनय गर्ने मौका अहिले सम्म पनि पाएनन् !
आलिया भट्टले आफ्नो विवाहबारे गरिन् यस्तो खुलासा, कहिले हुन्छ त बिहे?
रक्सी खुवाएर यी चर्चित र्यापरको बलात्कार, इन्स्टाग्राम मार्फत गरिन् यस्तो खुलासा!